Mobile9 bụ ebe i nwere ike ịhụ nnọọ ihe ọ bụla yiri ka smart igwe. Ma ị chọrọ ụdaolu ma ọ bụ na akwụkwọ ahụ aja, gburugburu ma ọ bụ ngwa, egwuregwu ma ọ bụ vidiyo, mobile9.com bụ saịtị ahụ maka gị. Ebe a bụ ụfọdụ nke ahọrọ egwuregwu na android hụrụ ga-arụ na ha nwere ike mfe hụrụ mobile9.com nakwa dị ka ụfọdụ ndị ọzọ weebụsaịtị maka egwuregwu.
1. Tappy taịl nile
Nke a bụ egwuregwu mara iji nwalee ndidi na omume oge nke onye ọrụ. Ọ na-e kpọmkwem haziri maka nzube a. Ọ bụrụ na i chere na ị smart na ngwa ngwa, mgbe ahụ, na-agbalị egwuregwu a na-ahụ maka onwe gị ebe ị na-eguzo.
2. Nsogbu nke Clans
Ị bụ onye ndú. Ị bụ isi nke obodo gị. Ị ga-ewu obodo. Unu na-eme n'aka na ọ bụ ọgaranya. Ị ga-ewu ihe ma na-ewelite otu agha ma gbochie obodo gị si mwakpo.
3. Hill ọrịrị Racing
A free physics dabeere egwuregwu nke bụ nnọọ eri ahụ. Newton Bill bụ onye na-agba nke ụgbọala ya na o nwere ịgba ọsọ n'elu na imeri ndị kasị elu ugwu. Dị iche iche ụgbọala ike ga-eji na bonuses na-nwetara site stunts. Vehicles nwekwara ike kwalite.
4. Nkata Gbaanụ
Egwuregwu a dabeere na ezigbo physics ụkpụrụ. Nọmba nke bọọlụ na-ejedebeghị mere ọkpụkpọ kwesịrị ịkpachara anya nke na-eme a oge ịse. Ịdọrọ dotted akara na ihuenyo na ịgbanwe ya maka nri oge ịse nke basketball.
5. Swiiti anwụrụ Saga
Na onye na-adịghị maara banyere nke a na-ewu ewu egwuregwu. A fun egwuregwu na-atọ ụtọ na tọrọ ụtọ ndịna. Ọ bụ nnọọ eri ahụ na e nwere ọtụtụ narị na ọtụtụ narị etoju. Dum egwuregwu dabeere swiping mkpịsị aka gị elu, ala, aka ekpe ma ọ ziri ezi.
6. Swiiti anwụrụ soda Saga
Nke a bụ egwuregwu ndị na-mepụtara Swiiti anwụrụ Saga. Ọ bụ ọbụna ihe na-atọ ụtọ, na-akpa ọchị na-eri ahụ. Enwe ụfọdụ ndị ọhụrụ candies, Chineke n'ịgwa na ezigbo-acha odo odo soda.
Na-enweta obi ụtọ n'ihi na a nkeji iri na ise mile ma gosi uru ị bara dị a-akwọ ụgbọala. Elu àgwà ndịna-emeputa jikọtara na ihe na-eri ahụ egwuregwu play bụ ihe mere ka egwuregwu na-ewu ewu n'etiti ìgwè mmadụ na n'elu 1 nde downloads.
8. Game nke War-Fire Age
Nke a na-metụtara agha. Ị ga-ewu gị onwe gị agha.
9. Defense Wụk
Onye m hụrụ n'anya planet e wakporo site obi tara mmiri ndị ala ọzọ na o nwere ga-azọpụta. Naanị gị nwere ike ịzọpụta ya. Aga n'ihu ma na-eme ka anyị dị mpako.
Ọ bụ ihu ọma 2 na 1 ie a egwuregwu nakwa dị ka a mpempe nkà. Egwuregwu kemgbe dị otú ahụ mara mma na-deere na ọ comprises nke dị nnọọ ìhè na ọchịchịrị na ya anya nnọọ mma.
> Resource> emulator> Top 10 Recomended Android Games on Mobile9